Warshadaha Nidaamka Sumeeynta otomaatiga ee Shiinaha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Qalabka Caafimaadka ee Kang Weishi
Nidaamka sumaynta otomaatiga ee otomaatigga ah waxaa badanaa lagu isticmaalaa meelaha lagu qaado ururinta dhiigga sida qaybaha isbitaalka, bukaan-socod eegtada bukaan-socodka ama baaritaanno jireed. Waa nidaam ururinta tijaabada dhiiga ee otomaatiga ah kaas oo isku daraya safka, xulashada tuubada caqliga leh, daabacaadda calaamadda, dhejinta iyo bixinta.
Nidaamka sumaynta otomaatiga ee otomaatigga ah waxaa badanaa lagu isticmaalaa meelaha lagu qaado ururinta dhiigga sida qaybaha isbitaalka, bukaan-socod eegtada bukaan-socodka ama baaritaanno jireed. Waa nidaam ururinta tijaabada dhiiga ee otomaatiga ah kaas oo isku daraya safka, xulashada tuubada caqliga leh, daabacaadda calaamadda, dhejinta iyo bixinta. Nidaamka iyo isku xirnaanta isbitaalka LIS / HIS, aqrinta kaarka bukaanka, si otomaatig ah u helida macluumaadka bukaanka la xiriira iyo waxyaabaha tijaabada ah, si toos ah u xulashada tuubooyinka tijaabada ee midabada kala duwan iyo tilmaamaha, daabacaadda macluumaadka bukaanka iyo sheybaarka, si toos ah u dhaafa tuubooyinka baaritaanka, hubinta kala dambeynta caafimaadka, bukaanka Macluumaadka, dhiig ururinta iyo waxa ku jira muunada ayaa gabi ahaanba is-waafajin waana nabad.
Nidaamka maaraynta dhiig ururinta caqliga leh wuxuu ka kooban yahay afarta qaybood ee soo socda:
Nidaamka nambaraynta iyo nambaraynta, nidaamka sumaynta tuubada tijaabada otomaatiga ah, nidaamka gudbinta tuubbada tijaabada iyo nidaamka kala sooca tuubada otomaatiga ah.
Nidaam-hoosaad kasta wuxuu leeyahay shaqada loo adeegsado kaligiis ama iskudarka. Nidaamka waxaa badanaa lagu isticmaalaa xarumaha bukaan-jiifka ee isbitaallada, xarumaha baarista caafimaadka iyo meelaha kale ee laga qaado ururinta dhiigga.
1. Bukaanka ayaa saf u wada wacaya lambarka.
2. Sugitaanka bukaan socodka
3. Kalkaalisadu waxay ugu yeeraa bukaanka inuu daaqadda tago si ay dhiig ugu ururiso aqoonsiga.
4. Nidaamka sumaynta otomaatiga tuubada otomaatigga ah ayaa garanaya qaadashada, daabacaadda, dhajinta, dib u fiirinta, tuubada tuubada, waxaana si toos ah u isticmaala kalkaaliyayaasha aruurinta dhiiga.
5. Kalkaalisada ayaa saaraysa tuubbada baaritaanka dhiiga la soo qaaday suunka mashiinka weeelka waxayna ku wareejisaa nidaamka tuubada baaritaanka si otomaatig ah.
6. Nidaamka kala sooca tuubbada tijaabada otomaatigga ah ayaa si otomaatig ah loogu kala saaraa iyadoo la raacayo tuubbooyinka tijaabada ah oo si otomaatig ah loo geyn doono qol kasta oo kormeer ah.
1. Qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka afar nooc ee nidaamka maaraynta aruurinta dhiigga, nidaam kasta ayaa lagu qori karaa ama si gooni ah ayaa loo isticmaali karaa.
2. Daaqadda aruurinta dhiigga waxaa ku qalabeysan shebekad madaxbannaan oo tijaabisa aaladda sheybaarka, aalad kasta waxay u shaqeysaa isbarbar dhig, ma saameynayso midba midka kale, waana loo ballaarin karaa markii loo baahdo.
3. Xawaaraha kala soocidda tuubbada tijaabada waa mid dhakhso badan, waxaa jira qaybo badan oo kala soocidda.
4. Aalado badan oo sumad-sheegid ah ayaa shaqeynaya isku waqti, isla markaana xawaareynta hal unug ay dhakhso u tahay (seconds4 ilbiriqsi / laan) si ay u buuxiyaan shuruudaha aruurinta dhiigga ugu sarreysa ee isbitaalka.
5. Nidaamka sumadaynta uma baahna in la joojiyo, tuubbooyinka baaritaanka ayaa lagu dari karaa wakhti kasta.
Hore: OEM / ODM Warshadda Remi Centrifuge 4 Tuubbo - Tuuri kara VTM Tube - Kang Weishi
Xiga: Qalinka Nooc cirbadaha aruurinta dhiiga
Qalinka Nooc cirbadaha aruurinta dhiiga